Somali News 09.20.21 | KWIT
Ricketts wuxuu sheegay in mas'uuliyiinta gobolka ay dib u soo celinayaan dashboard -ka maxaa yeelay isbitaallada COVID ayaa kor u kacay 10% usbuucii hore. Wuxuu sheegay in mar kale hoos loo dhigi doono haddii boqolleyda ay ka hooseyso 10%.
Waaxda Caafimaadka South Dakota ayaa soo warinaysa 446 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 iyo shan dhimasho tan iyo Jimcihii.
Waqtigan xaadirka ah South Dakota qiyaastii 63% dadka deegaanka ee jira 12 iyo wixii ka sareeya ayaa qaatay ugu yaraan hal qiyaas tallaal coronavirus ah ku dhawaad ​​58% si buuxda ayaa loo tallaalay.
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee laga helay Websaytka Iowa Coronavirus wuxuu muujinayaa Degmada Woodbury oo leh heerka ugu sarreeya ee cudurrada cusub ee COVID-19 ee waqooyi-galbeed Iowa. Heerka toddobada maalmood ah waa 15% iyada oo 464 xaaladood oo cusub lagu jiro muddadaas.
Madaxweyne Joe Biden wuxuu fududeyn doonaa xayiraadaha safarka shisheeye ee Mareykanka laga bilaabo Nofembar wuxuuna u oggolaan doonaa dadka ajnabiga ah inay soo galaan waddanka haddii ay haystaan ​​caddeyn tallaal iyo tijaabo COVID-19 oo xun.
(Xeerarka cusubi waxay beddelayaan xannibaadyo badan oo ka horjoogsaday dadka aan u dhalan ee joogay dalal gaar ah 14-kii maalmood ee la soo dhaafay inay soo galaan Mareykanka Waxay u oggol